Malunga nathi - Feilifu Technology Co., Ltd.
Feilifu Technology Co., Ltd esekwe ngo-Sep. 2010, kunye nabasebenzi abangaphezulu kwama-300, kuquka iinjineli zobugcisa ezingaphezu kwama-30. Inkampani ijolise kulwakhiwo, imveliso kunye nokuthengiswa kwesokethi somgangatho, isokethi yetafile, i-IP55 kunye ne-IP66 yokutshintsha okungangeni manzi kunye neesokethi kunye ne-IP66 ebiyelweyo ngeplastiki.
Inkampani ngaphambili yayisaziwa njenge Zhejiang Hent Electrical Co, Ltd, eyasekwa ngo-1998. Zonke iimveliso zigqithile kwisitifiketi se-3C kunye ne-ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2008, i-ISO14001: Inkqubo yolawulo lokusingqongileyo ngo-2004 kunye ne-OHSAS18001: 2007 inkqubo yolawulo lwezempilo nokhuseleko ishishini.
Iimveliso zethu ezisetyenziswa ngokubanzi kwizakhiwo ofisi, iiholo zemiboniso, moya, iibhanki, ect. Iimveliso zethu kwamanye amazwe eYurophu, eMelika, Middle East, mpuma Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Ukuza kuthi ga ngoku, sineempawu ezingaphezu kwe-90 ze-OEM.
Wamkelekile ukuba utyelele umzi mveliso wethu kwaye sisebenzisane nathi ngesandla!